Ụbọchị My Pet » Olee otú Iji enwe gị mbụ Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: Nov. 26 2020 | 2 min agụ
Oke ọtụtụ ugboro ọhụrụ di na nwunye overthink mbụ ha ụbọchị. Ha na-akpọ dị iche iche ndapụta na isi ha banyere ihe nwere ike nwere ike ime na-arụ ọrụ ha ime oké ụzụ tupu ha n'ezie enwetatụbeghị ọnụ. Isi echiche nke na-amata onye nke ọzọ na-ewe a n'oche azụ na-echegbu onwe ya banyere ma ma ọ bụ na ha na-eme a mmetụta ọma – na-na ha na-emetụ ihu ha nke ukwuu, na-ekwu okwu nke ukwuu, -adịghị ekwu okwu zuru ezu, na na na na.
Mbụ ụbọchị kwesịrị-abụ oge nke na-amata onye nke ọzọ na-ege ntị na-aza ha ihe ha na-ekwu. Olee otú ị pụrụ ige ntị onye nke ọzọ mgbe ị na-aga ihe ị na-aga-ekwu na ihe ị na-ma ọ bụ na-adịghị eme mgbe ọ na-ekwu? Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya, na ị na-n'ezie okodu oge gị lekwasịrị anya gị na-echefu na isi na-elekwasị anya kwesịrị na onye nke ọzọ. Unu na-eji ụbọchị nile na onwe gị; -enye onwe gị a ezumike na-ewepụta oge na onye ọzọ.
Ya mere, mkpa ka ị ga-esi gị isi na-elekwasị anya na-eme ugbu a. Gịnị ka ọ na-asị na ị nwere ike ikwu na? Gịnị na-enye na-eme nke ga-amasị gị ịmatakwu banyere? Ọzọ ezi echiche bụ icheta na nke a bụ mbụ ya ụbọchị kwa, o yikarịrị nnọọ ka ụjọ na-atụ dị ka ị na-. Ndi na-echefu na-emeghe ụzọ maka gị? Ma ọ bụ ọ bụghị sere gị oche si? Ndi enye yie ka a ga-ekwu okwu banyere onwe ya na-adịghị na-arịọ gị ajụjụ? Mgbe ị na-ahụ ndị a ufodu si n'ọnọdụ onye nke ọzọ bụ ụjọ kwa, ọ dị mfe ka na-aga ma ịhụ ebe fọdụrụ n'abalị pụrụ iduga.
Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu banyere ihe ọjọọ ume, na-ụfọdụ mints gị obere akpa ma ọ bụ n'akpa uwe. Ọ ga-adị mma nwere ụfọdụ Kleenex ma ọ bụ a handikachifu na gị nakwa. Ị adịghị mkpa iji mee ka dum na nkà mmụta ọgwụ kabinet, ma na-enwe ihe ole na ole na gị ma ọ bụ gị nso ga-enyere tinye gị ala karị.
Isi ihe nile nke a bụ na-eji oge gị na ụbọchị ikpori ndụ na-na-ekpori ya ma ọ bụ ya ụlọ ọrụ. Ndụ na-eme mgbe ụfọdụ na ihe adịghị aga dị ka atụmatụ. Ọ bụrụ na ị na-na-emeghe uche (na obi) ị nwere ike tụgharịa na ihe ọ bụla emee. Nke a nwere ike ịbụ onye mbụ ụbọchị nke ọtụtụ. Izu Ike na-enwe na ya!